जाडोयाममा हाम्राे शरीरमा पानीकाे अपुग हुनसक्छ – onlinedarpan:
Posted on December 22, 2018 Author onlinedarpanComment(0) 28 Views
चिसो सुरु हुनासाथै हाम्रो खानपानको मात्रा बढ्छ तर, पानी पिउने मात्रा भने घट्दै जान्छ । जाडाेमा पानी पिउन सबैलाइ मुस्किल नै पर्छ ।
पानी वा जललाई जीवन मानिन्छ । हाम्रो शरीरको बनावटमा ५५ देखि ७५ प्रतिशत जल हुन्छ । शरीरले आफ्नो गतिविधि सञ्चालनमा धेरै पानी खर्च गर्छ ।
उदाहरणको लागि दिनरात सासफेर्दा करिव सवा गिलास पानी खर्च हुन्छ । पसिना र मुत्रको रुपमा शरीरको विषाक्त पदार्थलाई बाहिर निकाल्नमा पनि पानीको महत्वपूर्ण मात्रा खर्च हुन्छ ।
त्यसैले बारम्बार पानी पियरमात्रै हामी उपयोगमा आइसकेको जलको क्षतिपूर्ती गर्न सक्छौं ।
शरीरमा पानीको मात्रा भएर जाडोमा मानिसहरुलाई कब्जियतको समस्या, ग्याँस वा अन्य समस्याहरुले सताउन पनि सक्छ । त्यसैले यस्ता समस्याबाट बच्न खानपानमा ध्यान दिनुपर्छ ।
त्यसैले हामीले जाडो याममा पनि कम्तीमा २-३ लिटर पानी वा तरल पदार्थ जस्तै कागती पानी, नरिवल पानी, गि्रन टी लस्सी आदि पिउनुपर्छ ।
अमेरिकन इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनले शरीरको लागि पानीको पर्याप्त ग्राहृयतामाथि एक अध्ययन गरेको छ । पुरुषले एक दिनमा ३ लिटर र महिलाहरुले दिनमा २.२ लिटर पानी पिउनुपर्ने अध्ययनले सुझाएको छ ।
पानीको विकल्प के हो ?
पानी कहिले पिउने कहिले नपिउने ?
त्यहाँ भोजनमा रहेको भिटामिन मिनरल, कार्बोहाइड्रेट प्रोटी आदि अलग अलग गर्ने प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ । यो प्रक्रियामा पानीले प्रोपर लुबि्रकेन्टको काम गर्छ ।
सौन्दर्यमा अहम भूमिका
Share8TweetGoogle+Pin08sharesजताततै विवाहको दृष्य देखिन्छ । धेरै युवायुवतीहरु जोडी बन्न लागेका छन् । कतै प्रेम विवाह हुँदैछ, कतै मागी विवाह हुन लाग्दैछ। हिजोआज हामी फेसबुकको पुस्तामा छौ । फेसबुकमा हेरेको, भेटेको आधारमा पनि विवाह भैरहेको हुन्छ । फेसबुककै आधारमा एकले अर्कालाई मन पराइरहँदा उनीहरूका अभिभावक एवं अग्रजहरूको आशीर्वाद छ कि छैन त्यो बिर्सिरहेका हुन्छन्। श्रीमान –श्रीमती विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
दाङमा विद्यार्थी बोकेको बस दुर्घटना, ९ जनाको मृत्यु
आफ्नै श्रीमतीलाई बलात्कारको आरोपमा श्रीमान पक्राउ